गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeविचित्र संसार
विचित्र संसार (439)
यौनसम्बन्ध अघि गर्नै नहुने पाँच कुरा	Written by Yatra Daily
Sunday, 08 January 2017 15:37	हरेक कुरा भन्ने र गर्ने उपयुक्त समय हुने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा सही कुरा वा काम सही समयमा सही समयमा नगर्दा र नभन्दा त्यसको गलत असर हुने गर्दछ । त्यसैले कुनै पनि कुरा वा काम गर्दा सही अवस्था, मुड र माहौल हेरेर मात्र भन्ने र गर्ने कोशिस गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अझ बेडरुमको कुरा गर्ने हो भने यो नियम झनै बढी लागु हुने गर्दछ । कतिपय कुरा बेडरुममा नभन्नु नै उपयुक्त मानिन्छ । किनभने यस्तो अवस्थामा गरिने कुराले पार्टनरको मुड बिग्रन पनि सकछ । त्यसको असर सिधै रिलेशनसीपमा पनि पर्न सक्दछ ।
प्रेमिल अवस्था निकै संवेदनशील हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मुखबाट निस्कने एउटा गलत शब्दले पनि दुःखको कारण बन्न पुग्दछ । अन्तरंग पलहरुअघि समय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो समयले दुई जनाबीचको विश्वास बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा कुनै गलत शब्द निस्कन नदिने कोशिस गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
झुक्किएर पनि यस्ता कुरा नगर्नुस्
१. तपाई आफ्नो पार्टनरलाई झुक्किएर पनि नसोध्नुस कि यो उनको पहिलोपटक हो वा यसअघि पनि…..
२. कहिल्यै पनि आफ्नो साथीको तुलना आफ्नो पूर्व प्रेमी वा पार्टरसँग नगर्नुस् ।
३. झुक्किएर पनि त्यस्ता कुराको जिकिर नगर्नुस कि तपाईका साथीहरु उनका बारेमा कस्ता कुरा गर्दछन् ।
४. पैसासँग सम्बन्धित कुरा यो अवस्थामा नगरेकै राम्रो । किनभने आर्थिक हिसावकितावको कुरा यो काम सकेर पनि गर्न सकिन्पैसासँग सम्बन्धित कुरा यो अवस्थामा नगरेकै राम्रो । किनभने आर्थिक हिसावकितावको कुरा यो काम सकेर पनि गर्न सकिन्छ ।
५. तिमीलाई यो अवस्थामा देख्नु निकै अनौठो छ । यो कुरा तपाईको पार्टनरलाई नराम्रो लाग्न सक्छ । एजेन्सी	Published in
Be the first to comment!	Read more...	यसरी प्राप्त हुन्छ चरम यौन सुख	Written by Yatra Daily
Sunday, 08 January 2017 15:31	सेक्सका लागि केवल उत्साहित र उत्तेजित मात्र हुनुहुँदैंन । उसलाई सम्झनुपर्छ, जान्नुपर्छ । सेक्सको सुरुवात स्पर्शद्वारा हुन्छ । स्पर्शले मात्रै पनि स्त्री-पुरुष दुवै उत्तेजनाको अनुभव गर्न थाल्छन् । सेक्स विशेषज्ञका अनुसार सही तरिकासँग गरिएको स्पर्शले स्त्रीलाई अत्यन्तै सन्तुष्टी दिन्छ । सेयर योर सेक्स नलेज भन्छ-स्त्रीलाई मैथुनबाट स्पर्शबाट अधिक आनन्द प्राप्त हुन्छ । सेक्स विशेषज्ञहरुका अनुसार यौनक्रियाभन्दा पहिले स्त्रीलाई विशेष रुपले गरिएको स्पर्श उसलाई सेक्सको चरम आनन्दको अनुभव गराउँदछ ।
२०) स्त्रीका भंगाकुर सबैभन्दा संवेदनशील अंग हो । यसलाई चुम्बन गर्नाले पनि सेक्रमा चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ ।	Published in
Be the first to comment!	Read more...	यस्ता छन् यौन चाहना कम गराउन कारणहरु	Written by Yatra Daily
Monday, 14 November 2016 13:39	एउटा नयाँ अध्ययनले अनुसार केही महिलाहरुमा यौनेच्छा कम हुनुको कारण उनीहरुको दिमागसँग सम्बन्धित रहेको खुलासा गरेको छ। यो शोधका क्रममा महिलाहरुलाई उत्तेजित गर्ने भिडियो देखाइएको थियो । र, उनीहरुको मष्तिष्कमा भइरहेको परिवर्तनको जाँच गरिएको थियो । शोधकर्ताहरुको दावीअनुसार ती महिलाहरुको मष्तिष्कको स्क्यान फरक देखियो जुन महिला सेक्सप्रति उदासिन थिए । यो शोधमा काम गरिरहेका अमेरिकी बैज्ञनिकका अनुसार उनीहरुले आफ्नो शोधका क्रममा यस्ता स्पष्ट तथ्य पाए जसबाट थाहा हुन्छ कि सेक्सप्रति उदासिनता निश्चित रुपमा शारीरिक विमारी हो । यसका लागि शोधकर्ताहरुले महिलाहरुलाई उत्तेजित पार्ने भिडियो देखाएर त्यसक्रममा उनीहरुको मष्तिष्कको हलचलको जाँचसमेत गरेका थिए। सेक्स ड्राइभ हालैका वर्षहरुमा विज्ञानले महिलाहरुमा यौनेच्छाको कमीका लागि हाइपोउेक्टिभ सेक्स्युअल डिजाएर डिसअर्डर अर्थात (एचएसडीडी) लाई जिम्मेवार मानेको छ। तर सेक्समा उदासिनताका लागि पहिलादेखि नै आफ्नो साथीसँग भावनात्मक रुपमा गाढा सम्बन्धको स्तर, मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध र शारीरिक स्थितिलाई जिम्मेवार मानिदैछ । अब यो नयाँ शोधका प्रमुख डा. माइकल डाइमण्डका अनुसार एचएसडीडी एउटा वास्तविक शारीरिक विमारी हो । शारीरिक स्पष्टिकरण डा. डाइमण्डले भने–हामीले जुन शोधका क्रममा देख्यौ त्यसबाट थाहा हुन्छ कि यौनेच्छाको कमी वास्तवमा एउटा शारीरिक विकृति हो । तर यो दावीसँग यस क्षेत्रमा पहिलादेखि काम गरिरहेका अर्का विशेषज्ञ पूर्णतः सहमत छैनन् । उनका अनुसार यो शोध दिलचस्प हुन सक्दछ तर अझै यो क्षेत्रमा अरु काम गर्न आवश्यक छ। क्यामडेन र आ०लिंगटन मेन्टल हेल्थ ट्रष्टकी स्याण्डी गोल्डबेक वुड भन्छिन् – यो हेर्नका लागि कि मष्तिष्कमा जुन परिवर्तनको चर्चा गरिदैछ त्यो निराशाका कारण सेक्ससँग सम्बन्धित छ र यसमा गहन शोध आवश्यक छ। स्याण्डी गोल्डबेक वुडका अनुसार निराशा र डिप्रेसनलाई सेक्स समस्यामा जिम्मेवार मानिन्छ। केही अरु विशेषज्ञहरुका रायमा सेक्सप्रति उदासिनताका लागि मात्र कुनै एउटा कारणलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्न । किनभने यो एउटा मेडिकल समस्या हो र यो रहस्य अझै कायम छ कि यसको कारण एउटा छ वा धेरै । सेक्सप्रति आकर्षणमा कमीका लागि व्यस्त जीवनशैलीका साथै शारीरिक समस्याहरु, जस्तो कि पाठेघरमा गाँठो हुनुलाई पनि व्यापक मात्रामा जिम्मेवार मानिएको छ। विशेषज्ञहरुका अनुसार यो एउटा समस्या त हो तर जति मानिन्छ त्यो भन्दा कयौ कम महिला यसबाट प्रभावित छन् । बीबीसी Published in
Be the first to comment!	Read more...	यस्ता महिला बढी सेक्सी हुन्छन् ?	Written by Yatra Daily
Monday, 14 November 2016 13:38	महिलाको व्यक्तित्व जान्ने इच्छा हरेक व्यक्तिमा हुने गर्दछ। आकृति विज्ञान एउटा यस्तो अध्ययन हो जुन शरीरको अंग तथा चालढालबाट व्यक्तित्वको परिचय दिने गर्दछ। यहाँ हामीले पनि आँखा र नाकको बनावटबाट कसरी महिलाको व्यक्तित्व जान्न सकिन्छ भन्ने विषय पस्केका छौ । आँखा निकै चञ्चल, चमक तथा गहिरो पातलो र वरपर लालिमासहितकोआँखा, भाग्यशाली महिला हुनुको प्रतिक हो साथै यस्ता महिलाहरु समाजको नेतृत्व गर्ने प्रकारका हुन्छन् । छोटो, सुस्त, उदास स्लेटी रङ्ग, गोलो, केही मुडी, खाली र केही परेवाकोजस्तो आँआ भएका महिलाले कुरुपता प्रदर्शन गर्दछन् । यस्ता महिला चतुर हुन्छन् साथै उनीहरु जीवनमा अघि बढ्न चाहँदैनन् । रातो आँखा भएका महिलाहरु धोकेवाज र बेइमान हुन्छन् । यदि आँखा निकै लामो तथा हल्का लालिमायुक्त छ भने यस्ता महिला आवेशपूर्ण हुन्छन् भन्ने मान्न सकिन्छ । यस्ता आँखा भएका महिला समाजमा निकै लोकप्रीय हुन्छन् । गोलो वा कालो आँखा भएका महिलाहरु निकै सेक्सी हुन्छन् । सधैं निंदमा झै रहेने मदमस्त आँखा भएका महिला विपरीत लिङ्गीप्रति चाँचै आकर्षित हुन्छन् र चाँडै चरित्र त्याग गर्दछन् । नरम किनारा वा कालो पलवाला आँखा भएका महिला भाग्यशाली हुन्छन् । यदि आँखाको किनारमा हल्का रौं छ, आँखामा पँहेलोपन छ भने यस्ता महिला बढी विरामी हुन्छन् । नाक यदि एउटी महिलाको नामक सुगाको जस्तो झुकेको छ भने उनी राम्रो स्वभाव, सम्पत्ति मन पराउने, चतुर तथा परिवारको हित चिताउने हुन्छन्। सामान्य लम्बाई तथा सिधा नाक भएका महिलाहरु सुन्दर, बुद्धिमान, मेहनती तथा मिजासिला प्रकारका हुन्छन् । छोटो नाक भएका महिलाहरु चलाख, चतर, शरारती वा कामातुर हुन्छन् । यदि कुनै महिलाको नाक बीचबाट फैलिएको छ वा अगाडिको भाग अधिक उच्च छ वा अधिक मोटो छ भने यस्ता महिला प्रेम, सहानुभूतिबाट बञ्चित हुन्छन् । यस्ता महिला दुष्ट प्रवृत्ति, चरित्रहीन वा निर्णय लिनमा हतार गर्ने प्रकारका हुन्छन् । यदि नाक बढी नै चौडा र मोटो छ भने यस्ता महिलाहरु आलसी, बलियो नेतृत्व, घमण्डी हुन्छन् । यदि नाकको टीप छोटो छ भने यस्ता महिला दासले झै जीवन बिताउने प्रकारका हुन्छन् । नाकको टिप लामो हुनु उनीहरुको कठोर स्वभावको प्रतिक हो । यदि टिप फैलिएकोछ भने श्रीमानको दीर्घायु हुनुको प्रतिक हो। नाकमा रौं भएका महिलाको स्थिति चतुर र अशुभव हुने गर्दछ। नोटः यो आँकलन केवल स्वभाविक रुपमा भगवान प्रदत्त शारीरिक अंग वा चालढालमा आधारित छ। एजेन्सी Published in
Be the first to comment!	Read more...	सेक्स गर्नुस मोटोपन घटाउनुस्	Written by Yatra Daily
Monday, 14 November 2016 13:37	अनावश्यक रुपमा तौल बढेर धेरै हैरान भएका छन् । यसका लागि उनीहरुले अनेक उपाय पनि अपनाएका छन् । तर, एउटा नयाँ अध्ययनले अचम्मको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययनका अनुसार तौल घटाउने हो भने अब जिमखानातिर होइन सिधै आफ्नो बेडरुमतिर जाँदा हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार वजन घटाउनका लागि कसरतभन्दा सेक्स बढी असरदार मानिँदैन, तर त्यो सत्य होइन । वैज्ञानिकहरुले एक घण्टासम्म ओछ्यानमा रोमान्स गर्दा करिबकरिब त्यति नै क्यालोरीज खर्च हुन्छ जति आधा घण्टा दौडिदा । क्यानडाको क्युबेक युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुका अनुसार आधा घण्टाको सेक्सका क्रममा पुरुषले १२० क्यालोरी खर्च गर्छ भने महिलाको ९० क्यालोरी खर्च हुने गर्दछ । अध्ययनका अनुसार जवान र स्वस्थ पुरुष औषतः सेक्सका क्रममा एक मिनेटमा ४.२ क्यालोरी बर्न गर्दछ । जबकि ट्रेडमिलमा ९.२ क्यालोरी बर्न हुन्छ । यही महिलाहरु सेक्सका क्रममा एक मिनेटमा ३.१ क्यालोरी र दौडिने बेला ७.१ क्यालोरी बर्न गर्दछन् । आफ्नो अध्ययनमा बैज्ञानिकहरुले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका २० जोडी सहभागी गराएका थिए । सहभागी जोडीहरुलाई एक महिनामा एक पटक मात्र सेक्स गर्न भनिएको थियो । र, ट्रडमिलमा ३० मिनेटसम्म दौडिन पनि भनिएको थियो । सबै जोडीको नाडीमा एउटा ब्याण्ड बाँधिएको थियो । ताकि दौडिँदा र सेक्सका क्रममा उनीहरुले कति ऊर्जा खर्च गर्छन् थाहा पाइयोस् । पब्लिक लाइब्रेरी अफ साइन्समा प्रकाशित अध्ययनको परिणाम अनुसार ‘यो परिणाममा स्पष्ट छ कि सेक्स्युअल गतिविधिको नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । किनभने यो कसरत जत्तिकै आवश्यक छ ।अध्ययनमा संलग्न पुरुष र महिला दुवैले भने कि ट्रडमिलमा आधा घण्टा बिताउनुभन्दा बढी मजा सेक्स गर्नुमा छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार यौन गतिविधि मानवीय जीवनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जसको सिधा असर मानसिक, शारीरिक र यहाँसम्म कि हरेक व्यक्तिको जीवनशैलीमा पर्दछ । एजेन्सी	Published in
Be the first to comment!	Read more...	यस्तो पहिरनमा महिला बढी सेक्सी देखिन्छन्	Written by Yatra Daily
Monday, 14 November 2016 13:34	यदि तपाई मिजासिलो हुनुहुन्छ, जीवनलाई एक रसका रुपमा हेर्नुहुन्छ भने यो खबर तपाईका लागि नै हो । जुन महिला सेक्सको खोजीमा हुन्छन् उनीहरुले रातो रंगको कपडा लगाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । एक अध्ययनका अनुसार जुन महिलाहरु शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक हुन्छन् उनीहरु रातो रंगको कपडा लगाउने गर्दछन् । यसअघि गरिएको अध्ययनअनुसार रातो पहिरनमा सजिएका महिलालाई पुरुषले सेक्सी आँखाले हेर्नें र बढी आकर्षक मान्ने गरेको देखिएको थियो । महिलाहरुले पनि सामाजिक पर्वमा रातो रंगको कपडामा सजिएका महिलाबाट खतरा महशुस गर्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार सेक्सको खोजीमा महिलाहरुले रातो पहिरनमा हुन्छन् । न्युयोर्कस्थित रोचेस्टर युनिभर्सिटी, स्लोभाकियाको ट्रनावा युनिभर्सिटी र स्लोभाक एकेडेमी अफ साइन्सेसको अध्ययनमा भनिएको छ–यदि तपाई रातो रंगको पहिरनमा हुनुहुन्छ भने अन्य महिलाले तपाईलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने छन् । यो हरेक अवस्थामा हुन्छ । तर, अन्य महिलाहरु र पुरुषहरुको संकेतबाट सावधान रहनुस् कि तपार्य सेक्समा रुची लिनुहुन्छ । कुनै आकर्षक पुरुषसँगको भेटका लागि महिलाहरु रातो रंगको सर्ट लगाउन मन पराउछन् । तर, मन परेको पुरुषका साथ भेटेको अवस्थामा उनीहरु यस्तो गर्दैनन् । तीन शोधमा शोधकर्ताहरुले रातो रंगबाट महिलाहरुले के संकेत पाउछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन खोजेका थिए । पहिलो प्रयोगमा पाइयो कि महिलाहरु अरुलाई रातो पहिरनमा देखेर सेतो पहिरनमा रहेका महिलाको तुलनामा उनीहरुलाई सेक्सका लागि बढी आँतुर मान्छन् । एजेन्सी	Published in
Be the first to comment!	Read more...	एउटा यस्तो ठाँउ, जहाँका केटाहरु मोटी केटी मन पराउँछन् Written by Yatra Daily
Wednesday, 28 September 2016 20:19	एजेन्सी । मनिसहरु प्रायजसो दुब्ली–पातली केटीहरु मन पराउँछन् । शहरका केटीहरु मोटोपना कम गर्न जिम, व्यायाम तथा योग गर्ने गर्छन् । तर एउटा यस्तो ठाँउ छ, जहाँका मान्छेहरु दुब्ली पातली भन्दा मोटी केटीहरु मन पराउँछन् । तिनै मोटी केटीको बिहे पनि चाँडै हुन्छ र समाजमा सम्मान पनि धेरै मिल्छ ।
अफ्रिकाको केही इलाकामा मोटी केटीहरुलाई एकदमै मन पराइन्छ । त्यहाँ उक्त परम्परालाई ‘लेबलाह’ भनिन्छ । यस्तो अचम्मको परम्परा, जहाँ पाँच वर्षको उमेरबाट नै ‘फ्याट फार्म’ अर्थात मोटो बनाउन पठाइन्छ ।
फ्याट फार्ममा केही वर्ष बसेपछि उनीहरुको तौल धेरै नै बढ्छ र मोटी देखिन्छ । यस फार्ममा गएपछि धेरै मात्रामा खाना खुवाइन्छ । कहिलेकाहीँ त उनीहरुले उल्टी पनि गर्छन् । तर पनि उनीहरुले सबै खाना खानै पर्छ ।
उक्त ठाँउमा मोटीहरुलाई बिहेको समयमा प्राथमिकतामा राखिन्छ । जब केटा पक्ष केटी हेर्न जान्छन् उनीहरुको निशाना मोटी मै पर्ने गर्छ ।	Published in
Be the first to comment!	Read more...	यि युवती बनिन् विश्वकै १ नम्बर पोर्नस्टार, पोर्न फिल्म खेलेको भन्दै मार्ने धम्की Written by Yatra Daily
Wednesday, 28 September 2016 20:07	एजेन्सी । पोर्न अर्थात ब्यू फिल्म धेरै युवतीले खेलेका छन् । तर मुस्लिम समुदायबाट कमै सुन्दरीहरुले मात्र अश्लिल चलचित्रमा खेलेका छन् ।
ति मध्येमा पनि कमैले मात्र चर्चा कमाएका छन् । ति मध्येकी एक हुन् २१ वर्षकी मिया खलीफा ।
लेवनानी मुलकी मुस्लिम युवती अश्लिल चलचित्रको दुनियाँमा प्रवेश गरेको ३ महिनमा संसारकै सबै भन्दा चर्चित बन्न पुगेकी छिन् ।
उनी नम्बर १ पोर्न स्टार बनेपछि उनलाई कारवाही गर्ने र मार्ने सम्मका धम्की आउन थालेको एक अन्र्तवार्तामा उनले बताएकी छिन् ।
एक वयस्क वेभसाइटका अनुसार उनी संसारकै सबैभन्दा चर्चित अर्थात नम्बर १ पोर्न स्टारका रुपमा घोषित भएकी थिइन् ।	Published in
Be the first to comment!	Read more...	म विवाहित युवती हुँ किन यौनसम्पर्क पीडादायी भएको होला ? Written by Yatra Daily
Wednesday, 28 September 2016 19:53	डा : राजेन्द्र भद्रा
म विवाहित युवती हुँ । मेरो श्रीमान्को उमेर ३७ वर्ष र मेरो उमेर २३ वर्ष छ । मेरो यौन जीवन सन्तोषजनक छैन । यो सधैं नै पीडादायी हुने गरेको छ, त्यसैले म यौनसम्पर्कबाट टाढा भाग्छु, जसका कारण मेरो श्रीमान् रिसाउनुहुन्छ । ममा यौनसम्बन्धी कुनै रोग पनि छैन । किन यौनसम्पर्क पीडादायी भएको होला ?
साप्ताहिकबाट	Published in
Be the first to comment!	Read more...	समुद्री किनारमा ब्वायफ्रेण्डसँग रियलिटीस्टार काइली कमाल Written by Yatra Daily
Wednesday, 17 August 2016 14:10	रियलिटी स्टार काइली जेनर यतिबेला बहामास बिचमा विदा मनाइरहेकी छन् । उनका साथ उनका ब्वायफ्रेण्ड रैपर टियागा पनि छन् । बिचमा काइली कहिले रातो त कहिले सेतो बिकिनीमा देखा परेकी छन् । उनी निकै बोल्ड एवं सेक्सी देखिएकी छन् । उनले टियागाका साथ पानीमा लामो समय मस्ती गरिन् । उनी टियागाको पिठ्युँमा पनि देखा परिन् । बिचमा पनि उनी निकै मस्ती गरिरहेको देखिएकी छन् । आफ्नो मस्तीमय पललाई उनले तस्वीरमा उतार्न लगाएकी छन् । बहामास बिचमा काइली सेतो बिकिनीका साथ रातो कपालमा निकै बोल्ड देखिएकी थिइन् । उनले आफ्नो लुक्स परिवर्तन गर्दै रातो रंगको विग लगाएकी थिइन् । आँखामा ठुलो चस्मा, एउटा हातमा मोबाइल र अर्कोमा ड्रिक्स लिएकी छिन् । एजेन्सी Published in
महिला रेश्लरलाई ब्राले धोका दिएपछि	धेरै सम्भोग गरेर मात्र हुँदैन गर्भधारण शनिबारको रात महिलाहरु बढी उत्तेजक	बुटवलका होटलहरुमा यसरी मौलाउँदैछ यौनधन्धा	Page 1 of 32	StartPrev12345678910NextEnd	भर्खरैको समाचार	वीरगञ्जको वडा नम्वर २१...